Tafatirka barnaamijyada naqshadeeyayaasha garaafka | Abuurista khadka tooska ah
Tafatirka barnaamijyada naqshadeeyayaasha garaafka
Jorge Neira | | Qalabka Naqshadeynta, muujiye
Barnaamijka ugu caansan ee loo isticmaalo in lagu muujiyo sawirada dulinka ayaa ah Adobe Illustrator. Tani waa shey isticmaala naqshadeynta dulinka ay weheliyaan walxo xisaabeed si loo abuuro midabbo, xariiqyo iyo qaabab.
Tani waxay na siinaysaa fursado aad u tiro badan markay tahay fulinta mashaariicda cabirka aad rabto, sidoo kale way kuu ogolaaneysaa ku samee naqshado miisaanka waaweyn sida ay tahay boorarka, inkasta oo waxa ugu fiican ee intaas oo dhami ay tahay in aanu jirin nooc pixelation ah oo shaqada ku jira.
1 Barnaamijyada tafatirka ugu fiican ee naqshadeeyayaasha garaafka
2 Barnaamijyada tafatirka ee bilaashka ah iyo kuwa lacag bixinta ah
Barnaamijyada tafatirka ugu fiican ee naqshadeeyayaasha garaafka
Maxaa ka dhigay qalabkan mid gaar ah waa naqshadeynta dulinka u adeegta si loo muujiyo loona naqshadeeyo, loo oggolaado in la sameeyo sawiro, astaamo, boodhadh iyo waxyaabo badan oo naqshadeeye garaafku sameeyo. Laakiin waa in la sheegaa in tani ay tahay aalad lacag la bixiyo oo ay ku kacayso lacag fiican sidaa darteed naqshadeeyayaal badan ayaa raadinaya xulashooyin kale, runta ayaa ah inay badan yihiin internetka. qalabka bilaashka ah taasi sidoo kale way na caawin kartaa waana in kuwa xorta ahi ay naga caawiyaan inaan keydino lacag fiican.
Inkscape waa ikhtiyaar wanaagsan in waxay lamid tahay Sawire-bixiye Iyo waxa ugu fiican waa inay bilaash tahay, qalabkani wuxuu na siinayaa muuqaalada dulinka noocyadiisa kala duwan, isagoo ah aalad ay adeegsadaan dad xirfadlayaal ah, sawir qaadayaal iyo naqshadeeyayaasha garaafka.
Inkscape Waxay leedahay ikhtiyaar gaar ah oo lagu abuuri karo qabanqaabooyin iyo qaabab, waxay kaloo noo oggolaaneysaa inaan sameyno abuurno horumarsan, waxay leedahay miirayaal badan iyo sawirro buuxiya. Ku dhowaad dhammaan xulashooyinka Sawirka waxaa laga heli karaa Inkscape.
Haddii aad ku wanaagsan tahay xisaabinta, waxaad ku dari kartaa noocyo kale oo barnaamijyo ah nidaamkan, qaar kuma raacsani ikhtiyaarkan maxaa yeelay si tartiib tartiib ah ayey u shaqaysaa, laakiin tan dhab ahaantii waxay kuxirantahay nidaamka qalliinka in aad isticmaasho.
Dhinaca kale, sidoo kale waad isticmaali kartaa qalab nifty loo yaqaan SVG.
Maxaa tan ka dhigaya kuwa ugu jecel in ay tahay mid aad u fudud in la isticmaalo oo ay fududahay in la barto, sidaa darteed ay u isticmaali karaan nooc kasta oo qof ah.
Kama baaqsan karno inaan xusno qalab leh dhammaan xulashooyinka Sawirka oo aad u fudud, kani waa GravitWaxa ugu fiican oo dhami waa inay si toos ah ugu dhexjirto biraawsarka, soo degsasho lama-huraan ah lagama maarmaan inay tahay in la bilaabo isticmaalkeeda qalabkan waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo aalad ah illaa iyo inta aad ka heli karto internetka.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso si aad ubilaawdo shaqada Gravit waa inaad isdiiwaangaliso, intaas ka sokow waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho Chrome, laakiin sidoo kale waad ku isticmaali kartaa Safari iyo Firefox. Waxay leedahay qalab ay si caadi ah u isticmaalaan dhammaan naqshadeeyayaasha, sida xusullada, sawirrada, miirayaasha, lakabyada, saddexagalka, khadadka, goynta, qalimaan midabyo kala duwan leh, iyo qaabab kale oo gaar ah.
Intaa waxaa dheer sawirada waa la dhoofin karaa gudaha PNG, JPG iyo SVG.
Barnaamijyada tafatirka ee bilaashka ah iyo kuwa lacag bixinta ah
Waad dooran kartaa sidoo kale MUUQAAL, maadaama tani ay tahay aalad aad u adeegsan karto a software ama codsi shabakadeed. Kani waa barnaamij bilaash ah oo loo isticmaali karo in lagu saxo garaafyada aad abuureyso, waxaad ku sameyn kartaa desktop-ka ama biraawsarka hadda jira, tani waa barnaamij aad u fudud oo aad u macquul ah.
Barnaamijka naqshadeynta waa mid aad u fudud, ma haysatid fursado badan sida Adobe Illustrator, inkasta oo ay leedahay astaamo sida lakabyo, qoraal, qaabab, iyo wixii la mid ah. Tani waa ikhtiyaar wanaagsan oo qumman haddii aad bilow tahay oo aad bilaabeysid maxaa yeelay waad abuuri kartaa a muuqaal garaaf ah dadaal la’aan.
Tani waa aalad bilaash ah oo dadka bilaabaya inay ka shaqeeyaan adduunkan naqshad sawireedIkhtiyaar kasta oo aad doorato, qalabkan oo dhami waxtar weyn bay u leeyihiin naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Tafatirka barnaamijyada naqshadeeyayaasha garaafka